Madaxweynaha Puntland oo Shuruudo adag ku xirey magacaabista xubnaha Guddiga Doorashooyinka - Home somali news leader
Home NEWS Madaxweynaha Puntland oo Shuruudo adag ku xirey magacaabista xubnaha Guddiga Doorashooyinka
Madaxweynaha Puntland oo Shuruudo adag ku xirey magacaabista xubnaha Guddiga Doorashooyinka
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa wadahadalo uu maanta la yeeshay Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland waxa uu kala kulmay isfaham waa la xiriira qorshaha uu u tegey magaalada Garowe.
Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisul Wasaaraha dalka ayaa ka dalbaday Madaxweynaha Puntland inuu magacaabo guddiga doorashooyinka ee Maamul goboleedka Puntland xubnihii laga doonayay kadibna laga wadahadlo si wixii qaldan loo saxo.
Hase yeeshee, Madaxweyne Deni ayaa ku xirey magacaabista guddiga labo shuruud oo ah in la xaliyo arrinta gobolka Gedo oo dowlada federalka iyo Maamulka Jubbaland ay isku khilaafsan yihiin cidda maamulaysa gobolkaas.
Sidoo kale Madaxweyne Deni ayaa doonaya in dib u eegis lagu sameeyo guddiga doorashada ee ay dowlada federalka magacawday taasoo ah mid uu khilaaf xooggan ka taagan yahay.
Guddigan ayay Musharaxiinta dooneysa inay u tartamaan xilka Madaxweynaha Soomaaliya waxa ay ku sheegeen inay ku jiraan ciidamo nabad sugid ah iyo shaqaale rayid ah kuwaasoo aan dhexdhexaad ka noqon karin doorashooyinka.
Ra’iisul Wasaare Roble iyo Madaxweyne Deni ayaa sida ay sheegayaan ilo ku dhow dhow madaxtooyada Puntland waxa ay u muuqdaan arrimahooda kuwo midi midi ku taag ah oo aan dhinacna dooneyn in uu tanaasul ka sameeyo mowqifkiisa.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa u muuqda mid wajahaya tijaabadii ugu cusleyd tan iyo markii uu xilkan la wareegay waxana uu ra’iisul wasaaruhu doonayaa in si dhaqso ah loo dhamaystiro guddiga doorashooyinka ee laga sugayo Maamulada Puntland iyo Jubbaland.
Previous articleFrance to “stay calm and move on” as Britain prepares its fleet to protect fishing rights
Next articleDowlada oo amartay in dib loo soo celiyo gaadiid ay haystaan wasiiro hore iyo xildhibaano